​‘बाहुबली ३’ आउला त ? के भन्छन् राजामौली ? Weekly Nepal
काठमाडौँ । एसएस राजामौलीद्वारा निर्देशित दुई भागमा आएको ‘बाहुबली’ ले भारतीय सिनेमा उद्योगमा मात्रै होइन, विश्वमै सनसनी मच्चायो । यसै वर्ष अप्रिलमा ‘बाहुबली : द कन्कलूजन’ रिलिज भएपछि अब मानिसहरु सोध्न थालेका छन् ‘बाहुबली ३’ कहिले आउँछ ? तर यसको उत्तर राजमौलीसँग छ ।